Naya Post Nepal | बेहुला बेहुलीको गाडी भिरबाट खसेपछि, कस्तो छ बेहुलीको पछिल्लो अवस्था ? – हेर्नुस् भिडियो सहित
बेहुला बेहुलीको गाडी भिरबाट खसेपछि, कस्तो छ बेहुलीको पछिल्लो अवस्था ? – हेर्नुस् भिडियो सहित
प्युठानमा शनिबार बिहान बेहुली लिएर आउँदै गरेको जीप दु’र्घ’ट’ना मा पर्‍’यो। जिल्लाको नौबहिनी गाउँपालिकाको लुङ बाउनेबाट बेहुली लिएर गौमुखी गाउँपालिकाको लिवाङ जाँदै गरेको ग १ ज ५० ९२ नम्बरको जीप ओखरपाटामा सडकबाट १५० मिटर तल खसेर दु”र्घ’ट’नामा प’रेको हो।
दु”र्घटनामा नेपाली कांग्रेस गौमुखी गाउँपालिकाका उपसभापति वस न्त खड्कासहित ८ जनाले ज्या न गु’माए। ४ जना घा इते भएका छ न्। घा”इतेमध्ये बेहुलीसहित ३ जना ग’ ‘म्भी’र छन्।
२५ वर्षीय दानब हादुर खड्काको बिहेबाट फर्किंदै गरेको जीप गौमुखी गाउँपालिका का ६ ओखरपाटामा दु र्घटना हुँदा सोही वडाको लिवाङका ३९ वर्षी य उपसभापति खड्कासहित ८ जनाको मृ”त्यु भएको हो।
बेहुली लिएर फर्किंदै गर्दा दु”र्घट’ना’मा वसन्तकी श्रीमती ३९ वर्षीया वसन्ती र उनीहरूकी ११ वर्षीया छोरी एलिसाको मृ”त्यु भएको छ। वसन्तका ११ वर्षीय छोरा भिषण खड्का जन्ती नगएकाले घरमै छन्।
दु र्घटनामा मृ त्यु हुने अधिकांश नजिकका नातेदार छन्। कां’ग्रेस उपसभापति वसन्तका साला ३२ वर्षीय खिमबहादुर खत्री, वसन्त की बुहारी तथा बेहुला दानबहादुरकी दिदी २९ वर्षीया केशरी ख ड्का, वसन्ती, भाउजु ५२ वर्षीया नन्दी खड्काको मृ”त्यु’ भएको छ। हेर्नुस् भिडियो
२०७८ माघ २३, आईतवार प्रकाशित 1 Minute 186 Views